बैङ्क | Ratopati
बैङ्कका सीईओले कति कमाउँछन् ? access_timeपुस १९, २०७७
काठमाडौं । श्रम बजारमा अहिले पनि बैंकिङ क्षेत्रलाई प्रमुख आकर्षण मानिन्छ । राम्रो सेवा सुविधा, रोजगारीको सुरक्षा र कार्यालयभित्रै बसेर काम गर्नुपर्ने भएका कारण यो रोजगारी प्रमुख निजी क्षेत्रको रोजगारीमध्येकै प्रमुख आकर्षण बनेको हो । बैङ्कमा काम गर्ने साधारण कर्मचारीले प...
७१ बैङ्क तथा वित्तीय संस्था कम्पनी रजिष्ट्रारको ‘कारबाही’मा पर्ने निश्चित access_timeपुस ११, २०७७
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैङ्कको नियमनमा सञ्चालन हुँदै आएका ७१ बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरु समयमा साधारणसभा गर्न असफल हुने भएका छन् । कम्पनी ऐनको व्यवस्था अनुसार आर्थिक वर्ष पूरा भएको ६ महिनाभित्र साधारणसभा गर्न यी संस्थाहरु असमर्थ हुने निश्चित भएको हो । योसँगै ...
कोरोनाको त्रास : कसरी काम गर्दैछन् बैङ्कका कर्मचारी ? access_timeचैत २१, २०७६
गोठाटारबाट कमलादीस्थित ग्लोबल आइएमई बैङ्कको मूख्य कार्यालय पुग्न सँधै एकदेखि डेढ घन्टा लाग्थ्यो स्वस्तिका वलीलाई । तर आजभोलि उनी १५ देखि २० मिनेटमा कार्यालय पुग्छिन् । किनकि देश ‘लकडाउन’ छ, सडकमा मानिस र सवारी साधन फाट्टफुट्टमात्र हुने भएकाले ट्राफिक जामको स...
एलसी र बैङ्क ग्यारेन्टीको काम पनि घरबाटै गर्न सकिने access_timeचैत १२, २०७६
काठमाडौँ । बैङ्कमा खोलिने एलसी (प्रतितपत्र) र बैङ्क ग्यारेन्टीको काम समेत अब घरबाटै गर्न सकिने भएको छ । नेपाल बैंकर्स संघको बुधबार बिहान बसेको बैठकले अत्यावश्यक वस्तुको आयातका लागि खोलिने एलसी वा लिइने बैङ्क ग्यारेन्टीको काम सम्बधित शाखाका सम्पर्क व्यक्तिको समन्वयमा घरबाट...
तीन बैङ्क २ अर्ब क्लबमा : अरु बैङ्कको अवस्था कस्तो ? access_timeफागुन १, २०७६
काठमाडौं । वाणिज्य बैङ्कहरुको नाफा वृद्धिदर एक अंकमा एकोहोरो अंकमा झरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा २७ ओटा वाणिज्य बैङ्कले ३२ अर्ब ७५ करोड रुपैंया नाफा कमाउँदा उक्त वृद्धिदर ८.७५ प्रतिशतमा सीमित भएको देखिएको हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही समयमा बैङ्कहरुको...
‘बिग बैङ्क’ बन्दै ग्लोबल आईएमई, चुक्तापुँजी २० अर्ब access_timeमंसिर १३, २०७६
काठमाडौँ । बाणिज्य बैङ्कमध्ये अब सबैभन्दा ठूलो (बिग) बैङ्क ग्लोबल आइएमई बैङ्क बन्ने भएको छ । बैङ्क आफ्नो कोषमा करिब २० अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पु-याएर नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा बिग बैङ्कको रुपमा उदाउन लागेको हो । अर्को ‘क’ बर्गकै वाणिज्य बैङ्क जनता बैङ्कस...
नेपाल बैंकले २५ प्रतिशत लाभांश दिने access_timeमंसिर २, २०७६
काठमाडौँ । नेपाल बैंकले आफ्ना सेयरधनीलाई २५ प्रतिशत लाभांश दिने भएको छ । बैंकले गत वर्षको वितरणयोग्य नाफाबाट आफ्ना सेयरधनीलाई लाभांश दिन लागेको जनाएको छ । ९ अर्ब ८१ करोड ११ लाख चुक्तापुँजीको १५ प्रतिशत बोनस सेयर र १० प्रतिशत नगद लाभांश दिने निर्णय बैंकको म...
कति कमाउँछन् बैङ्कका सिइओहरुले ? access_timeकात्तिक ४, २०७६
काठमाडौं । आधा दर्जन बैङ्कले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत सिइओको तलब सार्वजनिक गरेका छन् । बैङ्क अफ काठमाण्डू, कुमारी बैङ्क, सानिमा बैङ्क, माछापुच्छ्रे बैङ्क, सिटिजन्स बैङ्क र एनआईसी एसिया बैङ्कले सिइओको तलब सार्वजनिक गरेका हुन् । बैङ्क अफ काठमाण्डूले सिइओलाई वार्षिक २ क...
वाफिया विधेयक संसदमा : सञ्चालक सीईओको नियुक्तिमा राष्ट्र बैङ्कको स्वीकृति चाहिने access_timeभदौ २७, २०७६
काठमाडौँ । बुधबार प्रतिनीधिसभामा बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ लाई संसोधन गर्न बनेको विधेयक दर्ता भएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सो विधेयक दर्ता गराएका हुन् । विधेयकले बैङ्क तथा वित्तीय सस्स्थाका सिइओ तथा सञ्चालकलाई बाँधेको छ । केन्द्रीय बैङ्क (राष्...
गत वर्षको नाफाबाट कुन बैंकले कति लाभांश दिन सक्छन् ? access_timeभदौ २, २०७६
काठमाडौं–गत आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को नाफाबाट सबैभन्दा बढी लाभांश सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकले दिन सक्ने देखिएको छ । बैंकको प्रतिवेदनमा ३ अर्ब ६१ करोड ७३ लाख रुपैयाँ वितरण गर्न सक्ने नाफा रहेको देखाएइको छ । यो बैंकले ५ अर्ब भन्दा बढी खुद न...
२८ बैङ्कको नाफा ६५ अर्ब ३९ करोड access_timeसाउन ३२, २०७६
२८ वाणिज्य बैङ्कले आव २०७५/७६ मा ६५ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ मुनाफा गरेका छन् । आव ०७४/७५ मा तुलनामा बैङ्कहरुको खुद नाफा २४.५८ प्रतिशत बढेको हो । २०७४/७५ मा बैङ्कहरुले साढे ५२ अर्ब रुपैयाँ नाफा कमाएका थिए । २०७४/७५को तुलनामा तीन बैङ्कको नाफा घटेको छ ...
श्रम मन्त्रालयको निर्देशन : बैङ्क खाताबाट श्रमिकको पारिश्रमिक, नत्र कारवाही access_timeसाउन ३२, २०७६
सरकारले श्रम कानुनबमोजिम श्रमिकहरुको मासिक तलब सुविधा बैङ्कमार्फत भुक्तानी गर्न मुलुकभरका सबै उद्योग र प्रतिष्ठानहरुलाई निर्देशन दिएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले शुक्रबार सूचना जारी गरी श्रम कानुन अनुसार तोकिएको न्यूनतम पारिश्रमिक श्रमिकहरुलाई बै...